Abakhiqizi be-Hydrogen - abaThengi be-Hydrogen neChina China
Amakhasethi ethu okugcina i-hydrogen asetshenziselwa ukugcina amanye amagesi kaphethiloli we-H2 Fueling station, izimakethe ezivelayo, njengamanye amafutha e-hydrogen. Izikejana zethu zisezingeni eliphakeme kakhulu, zilandela amazinga noma izimiso ze-ASME, i-PED, njl., Ingcindezi yokusebenza yenzelwe i-69 bar, ne-1030bar, noma ngokwesidingo seklayenti, engasindi futhi yakhiqizwa ngesikhathi ngezidingo zakho.
Sinikeza nge-tube skid noma i-tube trailer yesigcawu sokulethwa kwe-H2 eSiteshini Sokonga Amanzi se-H2. Imikhumbi yethu ayizinga eliphakeme kakhulu, ihambisana namazinga noma izimiso ze-USDOT, ISO, KGS, GB, TPED, njll., Ingcindezi yokusebenza yenzelwe i-200bar, noma i-250bar noma ngokwesidingo seklayenti ngalinye. I-hydrogen tube skids eklanyelwe ukufezekisa umthwalo ophakeme kanye nezingcindezi.